चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा रात पर्दै, अब के हुन्छ , यसाे भन्छन् वैज्ञानिक !! – ताजा समाचार
चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा रात पर्दै, अब के हुन्छ , यसाे भन्छन् वैज्ञानिक !!
काठमाडौं – चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अब रात पर्न लागेको छ । यससँगै भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था इसरोको विक्रम ल्यान्डरसँग सम्पर्क गर्ने सम्भावना पनि लगभग सकिएको छ ।
सम्पर्क त परको कुरा, त्यसको तस्वीर समेत खिच्न नसकिने भएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासा समेतका स्पेस एजेन्सीले पजि विक्रम ल्यान्डरको तस्वीर खिच्न सक्ने छैनन् । यस खतरनाक रातमा विक्रम ल्यान्डर साबुत रहन एकदम गाह्रो हुनेछ ।
विक्रम ल्यान्डर अवतरण गरेको ठाउँमा सूर्यको प्रकाश आइपुग्दैन । तापक्रम घटेर माइनस १८३ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ । उक्त तापक्रममा विक्रम ल्यान्डरको विद्युतीय हिस्सा साबुत बस्दैन । विक्रम ल्यान्डरमा रेडियोआइसोटोप हीटर युनिट लगाइएको हुन्थ्यो भने साबुत बस्थ्यो ।
यसरी सम्पर्कको सम्भावना टुटेपछि इसरोले एक ट्वीट गरेर आफूहरूको हौसला नटुट्ने बताएको छ ।
इसरोका विश्वस्त सूत्रहरूले आइतवारतिर विक्रम ल्यान्डरसम्बन्धी जानकारी र तस्वीर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न सकिने बताएका छन् ।
नासाको लुनार रिकोनेसा अर्बिटर (एलआरओ) का प्रोजेक्ट वैज्ञानिक नोआह ई पेत्रोले चन्द्रमामा साँझ पर्न थालेको बताए । एलआरओले विक्रम ल्यान्डरको तस्वीर त खिच्ने तर तस्वीर स्पष्ट आउने ग्यारेन्टी नभएको उनले बताए । तैपनि
उक्त तस्वीर इसरोलाई दिइने उनको भनाइ छ ।